Ikhaya IZITOLO Zase-AFRAN FOOTBALL Abadlali bebhola laseSenegal I-Ismaila Sarr Ingane Yendaba Yobuntwana Plus Untold Biography Amaqiniso
I-LB inikeza iNdaba Ephelele Yebhola le-Football nge-isidlaliso "Isma“. Indaba yethu ye-Ismaila Sarr Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje.
Impilo Yasekuqaleni Nokuvuka Kwe-Ismaila Sarr. Ama-Credits Wezithombe: I-MixedArticle, i-MrScout, i-TransferMarket ne-dakarbuzz
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi uthole isivinini, ubuqili futhi angathola amagoli amahle- imfuneko ye-FIFA Forward ephelele. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abalandeli ababheka i-Ismaila Sarr's Biography ethakazelisa ngempela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Ama-Ismaila Sarr Ingane Yendaba Yobuntwana Ne-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
U-Ismaïla Sarr wazalwa ngosuku lwe-25 kuFebhuwari 1998 kunina, uMarieme Ba noyise, u-Abdoulaye Sarr Naar Gaad edolobheni elisogwini olusenyakatho nentshonalanga kweSanta Louis, eSenegal.
Ismaila Sarr idolobha lokuzalwa, Saint Louis (eyasungulwa ngo-1659) ibhekwa njengenye yedolobha elidala kakhulu lamakholoni ogwini olusentshonalanga ne-Afrika, ngezinye izikhathi olubizwa ngokuthi indlunkulu yaseFrance eNtshonalanga Afrika. Ngezansi umbono wedolobha lasogwini lwaseNtshonalanga Afrika lapho u-Ismaila Sarr enomndeni wakhe.
Ukwazi i-Rooms Yomndeni ka-Ismaila Sarr- uSanta-Louis, eSenegal. Isikweletu Sezithombe: Wikipedia
Ismaila Sarr Iminyaka Yasekuqaleni: Umsubathi webhola osheshayo ophuma emndenini wase-Afrika usebenzise ingxenye yokuqala yeminyaka yakhe eSaint Louis. Ukhule kanye nezingane zakubo ezine abazalwa abazali bakhe okungukuthi; UPapis, Kiné, Ndèye Ami noBadara.
U-Ismaila Sarr uduma kusuka emuva emndenini wesigaba esiphakathi sasemuva osebenza ubaba wakhe owayengumdlali webhola lezinyawo ngaphambili. Uthi bewazi?… Ubaba ka-Ismaila Sarr, u-Abdoulaye Sarr Naar Gaad wayengowokuzalwa emhlabeni wonke waseSenegal owayedlalela izwe laseNtshonalanga Afrika ngasekupheleni kweminyaka engama-80. Lokhu ngokweqiniso kusho ukuthi ibhola ligijima emndenini wakhe sibonga ubaba wakhe.
Ama-Ismaila Sarr Ingane Yendaba Yobuntwana Ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Eminyakeni engaphezu kwengu-20 ngemuva kokuthatha umhlalaphansi ebholeni, bekulula ukuthi u-Abdoulaye Sarr Naar Gaad adlulele kweminye imisebenzi futhi abhekane nokuthatha umhlalaphansi. Ubaba omkhulu yize edla amabala ebhola abambelele kulokho amadodana akhe akumele ayekethise emfundweni yebhola. Kuqala, wabhalisa izingane zakhe kubandakanya u-Ismaila Sarr ku- Isikole se-Oumar Syr Diagne itholakala eSt Louis, Senegal.
Ukuzondwa Isikole: U-Ismaila Sarr wasenyanya isikole futhi akazange ajabule ngesinqumo somzali wakhe sokumthumela esikoleni. Eqinisweni, ukufunda izincwadi zesikole bekungakaze kube yinto yakhe futhi kwabaningi ababemazi endaweni yakubo, ukuya esikoleni kwabonakala kungumbono nje. Esikhathini esiningi, wayeqa esikoleni ukuze ahambe ayodlala ibhola nabangane bakhe.
Abazali baka-Ismaila Sarr bathola imibiko eminingana emibi kothisha besikole kwathi lapho bebona lokhu, bathatha isinqumo sokuthatha indodana yabo. Babemenza ukuthi ayeke ukufunda esikoleni futhi bamphoqa ukuba a umphathi umsiki endaweni yakini ukuze afunde ukuqondanisa (umsebenzi noma ukuhweba komsizi).
Njenganoma imuphi umfundi omuhle, u-Ismaila Sarr wayethobekile ngokwanele ukuba afunde izisekelo zokulungisa, futhi wakwenza ngenkuthalo. Noma kunjalo, wakhe unembeza webhola Ngehluleka ukumvumela ukuthi aqhubeke nokusebenzela inkosi yakhe. Kalula nje, inhliziyo yakhe yayifuna ibhola. Ekugcineni, umfana onesibindi walandela inhliziyo yakhe njengoba ayeka ukujwayeza ukuqina futhi eqhubeka nokuphila impilo yakhe ethandekayo ekuqaleni, ngaphandle kwemvume yomzali wakhe.
Ama-Ismaila Sarr Ingane Yendaba Yobuntwana Ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
U-Ismaila Sarr bekumele ukuthi enze iziqu zakhe ngonyaka wesihlanu e-Oumar Syr Diagne School ngaphambi kokushiya imbangela abhalisele izivivinyo ne-AS Génération Foot. Ngemuva kwesivivinyo esiyimpumelelo, umfana omncane wabhalisela amakilasi ebhola.
Ismaila Sarr Identity Card e-AS Génération Foot. Amakhredithi: I-Alchetron
U-Ismaila Sarr waqala esikhungweni esifanayo neSadio Mane. Ufunde izisekelo zalomsebenzi e-AS Génération Foot njengoba yena nsuku zonke njengethuba lokuphumelela kulo msebenzi wami. Usize ikilabhu ukuthi yathuthuka ukusuka esihlokweni sesibili iye endizeni ephezulu yeSenegalese League. Isasasa lakhe elikhulu nokushisekela kwakhe ibhola kwambona ephupha ukuya e-Europe.
Ama-Ismaila Sarr Ingane Yendaba Yobuntwana Ne-Untold Biography Amaqiniso - Umgwaqo oDumela
Njengabathandi bebhola abaningi abanenhlanhla yokuphuma ezweni ukuyodlala eYurophu, ukuphela okuhlala njalo kuhlala kuyi-French Colon- France. Ngonyaka we-2016 wabona u-Ismaila eshiya umndeni wakhe ngemuva futhi wasayina inkontileka yakhe yokuqala yobungcweti ne-FC Metz.
Kwakumele ngijwayele ukuzibandakanya nendawo entsha kwakungelula ku-Ismaila osemusha ongakaze alishiye izwe lakhe futhi wayodlala kumhlaba wakwelinye izwe. Ngenxa yesidingo sokuhlaba umxhwele, uSarr uhlushwa ukulimala okuphindaphindayo, ngenxa yokubandakanyeka kakhulu kokuzibandakanya ensimini okuvame ukuba imbangela yokugcotshwa kwakhe ngokomzimba. Ukulimala ephindelela kwenze umndeni wakhe wesaba umsebenzi wakhe. Kwafika kungathi sína ukuthi ubaba ka Sarr kumele enze i-intervein. Ngokusho kwebhola lezinyawo;
“Ngisho nobaba wayevame ukungibiza, engikhuza ethi angishintshe indlela engidlala ngayo, ukuze ngingahlali ngilimala njalo. Kepha angikwazanga ukukusiza. Ngangiqhubeka nokulwa futhi nokubandakanya izitha zami ngize ngibe namandla futhi ngikwazi ukumelana nokulimala ”
Intuthuko ka-Ismaila Sarr neFC Metz yambona ebizwa yiqembu lesizwe lakhe- iphupho lakhe lifezeka. Ukubizwa yiqembu lakhe lesizwe kwalandelwa ukushaqeka okukhulu empilweni yakhe. Uthi bewazi?… U-Ismaila Sarr wayengaya eSpain futhi ajoyine iBarcelona enkulu. Umdlali webhola othembisayo uyenqabile iBarcelona ethi yayisemncane kakhulu umsebenzi wakhe. Ngabe uSarr bekukuhle ukubizwa yiSpanish Giant?. Ividiyo engezansi ichaza ukuthi kungani efanelwe yucingo yiFC Barcelona. Bona eminye imininingwane yakhe ephakeme.
Ama-Ismaila Sarr Ingane Yendaba Yobuntwana Ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Ekudumeni
U-Ismaila Sarr akazinakanga i-Barcelona enkulu ukuze ajoyine uRennes lapho aqhubeka khona nefomu lakhe elikhulu lokushaya amagoli (ezinye izinhloso zakhe) njengoba kubonwe kuvidiyo ngenhla. Lokhu kumenze wabona igama eqenjini laseSenegal leNdebe Yomhlaba wonke ye-FIFA ka-2018.
Ngenkathi eseRennes, u-Ismaila Sarr waqala ukubuka amavidiyo kaSadio Mane - ukushesha kwakhe, ukubabaza kwakhe kanye nezinhloso zakhe. Ngomhlaka 13 Disemba 2018, izinhloso ze-Sarr zasiza uRennes wahambisa indawo yakhe esigabeni se-2018-19 UEFA Europa League. Ukuthola umvuzo we-UEFA Europa League Goal of the Season (igoli lokuqala eliboniswe kuvidiyo ngenhla) Ngo-2018-19 wabona amakilabhu ejaha ukusayinwa kwakhe.
Ngomhlaka 8 Agasti 2019, uSarr wajoyina iklabhu yePremier League, eWatford, emalini yokudlulisa irekhodi leklabhu. Kusukela ebuya enkundleni yePremier League, kukhona ube yinto yothando olwengeziwe kubo bobabili laba badlali beFIFA kanye nabalandeli beWatford abahlabeke umxhwele ngejubane nobuqili bakhe no-Ismaila Sarr. Ngesikhathi sokubhala, umzuzu wokuma kukaSarr kwihembe laseWatford ubukade umdlalo ubhekene ne-United lapho washaya khona ivolumu futhi wenza inhlawulo eyasiza iqembu lakhe lahlula i-United 2-0.
Ngaphandle kokungabaza, u-Ismaila Sarr usefakazele umhlaba ukuthi uyizithembiso ezinhle ezilandelayo zesizukulwane sakhe seSenegal ngemuva I-Sadio Mane. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
Ama-Ismaila Sarr Ingane Yendaba Yobuntwana Ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Ubudlelwano
Ngokukhuphuka kwakhe udumo futhi ekhuphuka kulindelwe iPremier League, kuqinisekile ukuthi abanye abalandeli kufanele ukuthi sebeqalile ukuzindla ngokuthi ngabe u-Ismaila Sarr unentombi noma uma empeleni eseshadile.
Iqiniso ukuthi, akukho okuphikayo ukuthi ukubukeka kwakhe okumude, ubuso obuhle, ukumomotheka okunenhliziyo ehlangene nempumelelo yakhe njengomdlali webhola kwakungeke kumfake ohlwini olufisayo lwentombazane nezinto angazenza. Kodwa-ke, ngemuva kwebhola eliphumelelayo, kukhona intombi ebukhazikhazi eyaba ngumfazi onenhlanhla ka-Ismaila Sarr. Ngezansi isithombe sika-Ismaila Sarr nenkosikazi yakhe ngokusho I-DakarBuzz ihamba ngegama elithi Fat Sy.
Hlangana nonkosikazi ka-Ismaila Sarr. Ama-Credits Wezithombe: DakarBuzz
U-Ismaila Sarr uthathe isinqumo sokushada esemncane kakhulu- ngaphambi kokukwenza njengochwepheshe. Ekhuluma ngokuxhaswa akuthola kumkakhe, u-Ismaila wake wathi engxoxweni noDakarBuzz;
“U-Fat Sy wangisekela kakhulu, kudala ngaphambi kokuba ngikwenze njengomdlali oqeqeshiwe. Wenza umnikelo obonakalayo ezinhlelweni zami zomsebenzi njengoba kunguye olawula indlela engidla ngayo, amahora ami okuqeqeshwa nawokuphumula nami. Bengifuna ukushada ngisemncane kakhulu, ukuze ngibe nozinzo ngoba izilingo zinkulu kumdlali webhola. ”
Le vidiyo engezansi ifingqa uthando olujulile u-Ismaila Sarr analo ngomkakhe uFat Sy. Ubungani ngesinye sezizathu ezinkulu zokuthi kungani ashada esemncane kakhulu.
Ama-Ismaila Sarr Ingane Yendaba Yobuntwana Ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Personal
Ukwazi ngempilo yomuntu siqu ka-Ismaila Sarr kude nebhola kungakusiza uthole isithombe esiphelele sobuntu bakhe.
Ukwazi i-Ismaila Sarr Impilo Yomuntu
Ukuqala, siqala ngesinqumo sakhe sokuxazulula isikhathi. U-Ismaila Sarr ungumuntu okholelwa ukuthi noma yimuphi osemusha ofuna ukuba nomsebenzi ozinzile kufanele azame ukushada ngaphambi kwesikhathi. Lokhu kuyadingeka ukuze kugwenywe izilingo zokuba nomuntu onemicimbi ezokonakalisa imisebenzi yabo.
Okwesibili, ungumuntu osebenzisa indlela yendlela yokuphila. I-Sarr ayisetshenziselwa ukuphoqa izinto, ukukholelwa ukuthi into efanele izofika ngesikhathi esifanele. Uthanda nokwenza izinto ngejubane lakhe.
Okokugcina, empilweni yakhe, u-Ismaila Sarr ngesikhathi sokubhala akakholelwa 'Isiko le-tattoo'ithandwa kakhulu ezweni lanamuhla lebhola. Uveza inkolo yakhe mosque wakhe futhi ugcina uthando lomndeni wakhe enhliziyweni hhayi emzimbeni wakhe kuma-tattoos.
Ama-Ismaila Sarr Ingane Yendaba Yobuntwana Ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Komndeni
Naphezu kokungaboni ngaso linye okokuqala, abazali baka-Ismaila Sarr babejabule ngokuvumela indodana yabo ukuthi ilandele umdlandla wayo okhokhele. Ukuzijwayeza ukwenza lo msebenzi wokulinganisa amakhono akhe kusamsizile kakhulu emsebenzini wakhe. NgokukaSarr;
"Yize ngiwushiyile umsebenzi wokuhlanganisa amakhono, ngangixhumana ne-masteror yami futhi namhlanje usengumqambi wemfashini womndeni wami."
Ngaphambi kokuthi ahambele eFrance, u-Ismaila wafunga ukubenza babe ngabazali bakhe ikakhulukazi ngokuzinikela kwabo ngenxa yakhe. Kwakunzima kubaba wakhe, u-Abdoulaye Sarr Naar Gaad ukubhekana nokuthatha umhlalaphansi ebholeni. Namuhla, uyakujabulela ukuphinda aphile amaphupho akhe.
Mayelana Nezingane Zika-Ismaila Sarr: Ngokusho kuka-Ismaila Sarr ukhule kanye nezingane zakubo ezine. Unomfowethu ohamba ngegama likaPapis Sarr osebenza njengomeluleki wakhe emsebenzini futhi udadewethu okuthiwa nguKiné, onjengomama wesibili kuye. Enye ingane yakubo ibizwa ngokuthi nguNdèye Ami kanti omncane nguBadara.
Ama-Ismaila Sarr Ingane Yendaba Yobuntwana Ne-Untold Biography Amaqiniso - Indlela yokuphila
Ngemuva kocwaningo oluningi ngokuphila kuka-Ismaila Sarr, siyaqaphela ukuthi ungumfana olula nje obambelela kukho Izidingo ezingokoqobo ezingabizi kakhulu. Ngezansi kukanobhutshuzwayo onomyeni wakhe uCheikhou Kouyaté futhi kuncane okwaziwayo ngobunikazi bemoto ngemuva kwabo.
Ukwazi Indlela Yokuphila ka-Ismaila Sarr. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram neDailyRecord
Ukunquma phakathi kokusebenziseka nenjabulo okwamanje akusona isinqumo esinzima ku-Ismaila Sarr. Ngesikhathi sokubhala, uSarr akaze abonwe egcagcoma izimoto ezixakile, izindlu ezinkulu ezibonakala kalula ngabathandi bezinyawo abaphila ngezindlela eziphansi.
Ama-Ismaila Sarr Ingane Yendaba Yobuntwana Ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Wake wasebenza eceleni I-Sadio Mane ku-Charity: U-Ismaila Sarr ungumdlali webhola lezinyawo ongagcini ngokukhazimula enkundleni kuphela kepha abanye futhi emphakathini waseSenegal. Esithombeni esingezansi, ubonakala esebenza eceleni I-Sadio Mane ngezizathu zokupha, njengoba besiza abahlupheka kakhulu.
U-Ismaila Sarr ukhokha emuva kubantu bakhe. Isikweletu Sezithombe: I-Instagra,
Ubumnandi Bakhe neDribble- Isibusiso Ku-FIFA Gamers: KwiFIFA, akekho obonakala ethanda abadlali abahamba kancane. Kusetshenziswa isidlali esinePace kuyadingeka ukuthi ngabe uyahlasela noma uyajaha umhlaseli. USarr oneminyaka engama-21 ubudala ngesikhathi sokubhala uyisibusiso kubadlali be-FIFA uma kukhulunywa ngejubane nekhono lokushaya.
Ngeminyaka yakhe yobudala, i-Ismaila Sarr's Pace ne-Dribble iyisibusiso kumaFIFA Gamers. Isikweletu Sezithombe: I-SoFIFA, i-FutHead ne-GoonerNews
Uthi bewazi?… NguSadio Mane kuphela owenze izibiliboco eziphumelela kakhulu kunabakwaSarr abangama-27 kwi-Africa Cup of Nations ka-2018.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Ismaila Sarr yethu Yobuntwana Indaba Plus ne-Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokungakhethi. Uma uthola okuthile okungabukeki kulungile, sicela wabelane nathi ngokubeka amazwana ngezansi. Sizohlala sazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
I-Watford Football Diary
I-Troy Deeney Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts